ट्वीटरमा बहुमतको सुझावपछि अमेरिकी राजदूतको पहिलो भ्रमण लुम्बिनीबाटै ! « GDP Nepal
ट्वीटरमा बहुमतको सुझावपछि अमेरिकी राजदूतको पहिलो भ्रमण लुम्बिनीबाटै !
Published On : 15 November, 2018 11:45 pm
काठमाडौं । नेपालमा नयाँ अमेरिकी राजदूतमा र्याण्डी डब्लु बेरी काठमाडौं नआइपुग्दै एउटा ट्वीटर सर्भेक्षण भएको थियो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकृतले उनलाई काठमाडौंबाहिर सबैभन्दा पहिले कुन स्थानमा घुमाउनु उचित हुन्छ भनेर मत सर्भेक्षण गरेका थिए ।
दूतावासका चार्ज डे अफेयर्स माइकल सि. गोन्जालेजले गरेको यस्तो सर्भेक्षणमा ३६ प्रतिशत उत्तरदाताले नयाँ राजदूतलाई उपत्यकाबाहिरको पहिलो भ्रमण लुम्बिनीबाट गराउन सुझाव दिएका थिए ।
राजदूत बेरी काठमाडौं आएर राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरी प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न नेता तथा विशिष्ठ व्यक्तिहरुसँग भेटघाट पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले नेपाली चाडपर्व तिहार नेपालीले जसरी नै मनाए ।
ट्वीटरमा आएको सुझावअनुसार उनी उपत्यकाबाहिरको पहिलो भ्रमणमा भने लुम्बिनी गए । लुम्बिनीमा उनले स्थानीयसँग भलाकुसारी पनि गरेका छन् । दूतावासको सर्भेक्षणअनुसार नै उनी लुम्बिनी गएको दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।
ट्वीटरमार्फत गरिएको सर्भेक्षणमा २९ प्रतिशतले पोखरा भनेका थिए भने ९ प्रतिशतले मात्रै चितवनलाई उपयुक्त भनेका हुन् । यस्तै, अन्य समूहमा राखिएका इलाम मुस्ताङलगायतका स्थान रोज्नेमा २६ प्रतिशत छन् ।
४३९ जनाले मत दिएको ट्वीटर सर्भेक्षणअनुसार कतिपयले रारा, गोर्खा, सुदुरपश्चिम लैजान सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले काठमाडौं नजिकैको चन्द्रागिरीमा जानुपर्ने भनेका थिए ।
नयाँ राजदूतका रुपमा आएन लागेका बेरी सन् १९९३ मा अमेरिकाको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी सन् २००७ देखि २००९सम्म नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा ‘डेपुटी चिफ अफ मिसन’का रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उनलाई अमेरिकाको समलिंगी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दूतमा नियुक्त गरेका थिए ।